The Rohingya News Bank : NCA
Showing posts with label NCA. Show all posts
ICJ အမှုကို အပစ်ရပ်အဖွဲ့များ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း သုံးသပ်
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPST အစည်းအဝေးကို ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့မှာ ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်နေ့ကကျင်းပစဉ်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး ICJ မှာ မြန်မာနိုင်ငံ စွဲဆိုခံနေရမှုမှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့က အစိုးရ ဘက် ကနေ ထောက်ခံကြသလို ICJ ဘက်ကနေ ရပ်တည်ကြတဲ့အဖွဲ့တွေလည်း ရှိပါတယ်။ NCA အပစ်ရပ် ၁၀ ဖွဲ့ကတော့ အစိုးရရဲ့ ခြေလှမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ပြောဆိုနေပါတယ်။
Labels: 2019, AA, ABSDF, ICJ, JICM, mm, MNDAA, NCA, PPST, RFA Burmese, TNLA, Video, သတင်း
ICJ မှာ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမှုသည် အစိုးရမှ တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံ မှုကို ပြခြင်းဟု ပြော
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး ICJ မှာ တရားရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန်အတွက် အစိုးရ နှင့် တပ်မတော် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ခြင်း သည် အစိုးရမှ တာဝန်ယူ တာဝန်ခံ မှုကို ပြသခြင်းဖြစ်သည်ဟု ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ ယာယီ အဖွဲ့ခေါင်း ဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ် မှ ပြောဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင်ယနေ့ စတင်ကျင်းပသည့် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူ စာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့၏ ငြိမ်း ချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဦး ဆောင်အဖွဲ့ PPST အစည်းအဝေး အဖွင့်မိန့်ခွန်း တွင် PPST ယာယီ အဖွဲ့ခေါင်း ဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ် မှ ပြောဆို လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
Labels: 2019, ICJ, mm, NCA, PPST, သတင်း, တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့
ပစ်ခတ်မှုလျော့ပါးရေး သဘောတူထားပေမယ့် ရခိုင် တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်ဆဲ
နိုင်ကွန်းအိန်၊ 25 မတ်၊ 2019
လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေ လျော့ချရေး ဆက်လက် ဆွေးနွေးသွားဖို့ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ် ရေး နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာန NRPC နဲ့ သဘောတူခဲ့ပြီးနောက် ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကိုပဲ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အ တွင်း မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အကြား တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။
Labels: 2019, mm, NCA, NRPC, တပ်မတော်, ပဋိပက္ခ, ရခိုင်, ရခိုင်တပ်မတော်, ရသေ့တောင်
ဘင်္ဂါလီနဲ့ ပတ်သက်လာရင် UN တို့ INGO တို့က အစွန်းရောက်တယ်
“မြောက်ဦး စစ်တမ်း” စာအုပ်ဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေဆု (နိုင်ငံရေးစာပေဆု) ရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်ငံရေး သုတေသီ တဦးလည်း ဖြစ်သည့် ဦးမောင်မောင်စိုး / ဧရာဝတီ
အစိုးရက တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) ကို လက်မှတ်မရေး ထိုးရ သေးသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ၈ ဖွဲ့ကို ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး နေပြည်တော် တွင် ယခုလ ၂၁ ရက်နေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် တရားဝင် ဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်။
Labels: 2019, mm, NCA, NRPC, UWSA, ဝ, ဧရာဝတီ, မေးမြန်းခန်း, အေအေ
လေးလကြာအပစ်ရပ်ဖို့ တပ်မတော်ကို တရုတ်အစိုးရ ဖိအားပေးခဲ့
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ ကင်းလှည့်နေစဉ်
စစ်တိုင်းဌာနချုပ် ၅ခုမှာ ၄ လကြာအပစ်ရပ်ဖို့ မြန်မာ့တပ်မတော်ကို တရုတ်အစိုးရက ဖိအားပေးပြောဆိုခဲ့ တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံမှာ NCA မထိုးရသေးတဲ့ အဖွဲ့တွေကို ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့် မပေး ဖို့လည်း တရုတ်နိုင်ငံက အကြံပြုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ယူနန်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် အဖွဲ့ချုပ် KBC ခေါင်းဆောင် ၇ဦးနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ ပြောလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, KBC, mm, NCA, စစ်တိုင်း, တပ်မတော်, ရခိုင်
Myanmar president stresses union's independence, sovereignty.
Labels: 2019, Beijing, CGTN, en, MM Parliment, Myanmar, Myanmar Army, Myanmar Gov, NCA, News, Panglong Agreement, U Win Myint, Union Day
Myanmar’s Military Warns Ethnic Armies Against Trying to Expand Territory During Cease-fire.
Labels: 2019, AA, ARSA, en, Hindu, Human Traffick, IDP, MNDAA, Myanmar Army, NCA, PNLO, RCSS, RFA English, Rohingya, TNLA